Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiishii uu hoggaaminayey oo maanta kormeeray xeryaha ciidamada Puntland ee Galkacyo. – Radio Daljir
Oktoobar 6, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Oct 05 ? Waftigii saraakiisha ahaa ee uu hoggaaminayey taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta kormeer ku tagay xeryaha kala duwan ciidamada daraawiishta Puntland ee ku yaalla magaalada Galkacyo.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gen. Cabdiqaadir Sh. Cali Diini oo ay weheliyaan saraakiil AMISOM ayaa kormeerkiisa ku tagay xeryo dhawr ah, isagoo war-bixinno ciidanna ka dhagaystay saraakiisha Puntland ee ka taliya xarumaha uu booqday.
Gen. Diini, kormeerkiisa maanta waxaa iyana kala qaybgalay madax iyo mas?uuliyiin Puntland oo uu ka mid yahay wasiirka amniga Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan, taliyaha guud ee ciidan daraawiishta Puntland Gen. Siciid Dheere, taliyaha ciidanka aagga gobolka Mudug Col. Xagaafe iyo xubno kaleeto.
Kormeerka saraakiishaan ay ku tageen xeryaha ciidamada Puntland ee magaalada Galkacyo ayaa qayb ka ah qorshayaal lagu doonayo in tababaro dibadda ah loogu qaado cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland, taasoo ay iska-kaashanayaan Puntland iyo dawladda federaalku.
Waftigaan saraakiisha ah ee uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gen. Cabdiqaadir Sh. Cali Diini, ayaa deegaannada Puntland soo gaaray 30-kii bishii September, waxaana sidaan oo kale ay kormeero ku tageen xerayaha ciidamada Puntland ee magaalada Garowe.
Muqdisho oo maanta ay ka dhoofeen 125 arday oo ka mid ah kuwii helay deeqdii waxbarasho ee Turkiga.